धार्मिक तवरले दसैँ मान्नुपर्ने ठीक छैनः मोहन वैद्य :: यार्सान्यूज :: धार्मिक तवरले दसैँ मान्नुपर्ने ठीक छैनः मोहन वैद्य
धार्मिक तवरले दसैँ मान्नुपर्ने ठीक छैनः मोहन वैद्य जमानाका राम, रावण, दुर्गाका कथा ल्याएर मान्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन । यो थुप्रैले बुझेका पनि छन् । दसैँ मान्नुको पछाडि सामाजिक कारण बढी हो
आइतबार, असोज १९, २०७६ यार्सान्यूज
महिषासुरको प्रसङ्ग मैले अघि जोडेँ । पुरानो कथा र पुरानो किस्सालाई के छलकपट भन्ने यो धेरै गाह्रो छ । यी धर्म पुराणका कुरा गरिसाध्य छैन । असुरहरूलाई कतिले भौतिकवादी भन्छन् । देउताहरू आदर्शवादी हुन् भनेर थुप्रै लेखेका हुन्छन् । पुराणको कुरा आधा सत्य आधा असत्य । तिनै असुरहरूलाई भौतिकवादी भनेको हुन्छ । तिनै असुरवादीलाई एकदम देउताको तपस्या गर्थे भन्ने गरिएको छ । रामायणमा रावणले पनि तपस्या गर्थे भनिन्छ । भौतिकवादी हुन् भने किन तपस्या गरे त ? यस्ता खालका तोडमोड छन् । तर यसलाई छलछाम, षड्यन्त्र भन्नुभन्दा पनि राज्यसत्ताको कामै त्यही हो । यी मिथक हुन् । यी मिथकको व्याख्या गर्दा अलि सतर्क हुनुपर्छ । सबै साँचो हुन् भन्ने होइन । केही साँचा पनि हुन् । जस्तो महाभारत । महाभारत सबै झुटो हैन । त्यसभित्रका कैयौ अंश साँचा छन् । त्यसकारण यसबाट हामीले राम्रा राम्रा कुरा लिनुपर्छ ।
अहिले प्रगतिशीलहरू पनि बिग्रँदै गएर पुरानै परम्परामा फर्केका छन् । फेरि यहाँ हिन्दु धर्म मान्नेले काज क्रिया इत्यादि गर्ने कुरा बदल्नुपर्छ भनेर अरू अरू धर्म मान्नेले भन्ने, अनि आफ्नो धर्म सबै मान्ने । यसो गर्न पाइँदैन ।
यो अहिले सम्भव छैन । आन्दोलनकारीहरूले त गर्ने भए । हामीले पनि विभिन्न समयमा गर्न खोजेको त हो । जनयुद्धको बेलामा खोजेकै हो । लामो आन्दोलन नभई यस्ता कुरा गर्न सकिन्न । साँच्चिकै क्रान्ति हो नि यो । यो भनेको सांस्कृतिक क्रान्ति हो । सांस्कृतिक क्रान्ति विचारधारात्मक क्रान्ति हो । यसका लागि ठूलो पहल गर्नुपर्छ । जनतलाई जगाउनुपर्छ । अहिले किन सकिन्न भने यो राज्यसत्ताले धर्मको आडमा जनतालाई शोषण गर्ने काम गरेको छ । सारा धार्मिक विकृति, विङ्गतिलाई पवित्रीकरण गरेर गएको छ । यो गलत छ । त्यो छोड्दा बित्तिकै अन्धविश्वास हट्छ । अन्धविश्वास हट्दा राज्यसत्ता गुम्छ । पुरानो राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा जानुपर्छ । जनतासँग गरिने धार्मिक आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट भाषामाभन्दा वर्ग सङ्घर्ष जोडेर जाने भन्ने हुन्छ । जति कुरा गरे पनि हुने खानेले खर्च गर्छन् । नहुने खानेहरूले त के खर्च गर्न सक्छन् र ? बीचको पिढी देखावटी गर्दा त्यहीँ सिद्धिन्छ । कमायो कमायो सक्यो । मैले भन्न खोजेको अति गर्न भएन । समग्रमा राज्यसत्ता सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिन्छ । त्यसको निम्ति कुन आदर्शलाई मानेर गर्ने ? एउटा आदर्श, लक्षलाई अगाडि राखेर अभियान चलाएर जानुपर्छ । मानिलिऔँ साँच्चैको कम्युनिस्ट राज्यसत्ता आयो, अहिलेको हैन । साँचो राज्यसत्ता आयो भने हुनेखाने रहँदैनन् । जनताले श्रम गर्ने आधार हुन्छ । जनतालाई बिउँझाइन्छ । जनता बिउँझेपछि ठीकै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १९, २०७६ १४:१२